निर्मला बलात्कार प्रकरणः आफन्त जोगाउन घटना मोडियो ! – Everest Dainik – News from Nepal
निर्मला बलात्कार प्रकरणः आफन्त जोगाउन घटना मोडियो !
कञ्चनपुर, भदौ १२ । निर्मला पन्त पढ्न गएर बेपत्ता भएको रोशनी बम र बबिता बमको घरबाट अनुसन्धन गर्नुपर्छ भनेर प्रहरीलाई कसै भनिराख्नुपर्ने विषय होईन । तर तत्कालीन प्रहरी उपरीक्षक डिल्ली विष्टको टोली मात्र होईन केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सिआईबी का प्रहरी उपरीक्षक अंकुर जोशीको टोलीले पनि निर्मलाका आफन्त र स्थानीयको आग्रहअनुसार घरबाट अनुसन्धान गर्ने चासो दिएनन् ।
साउन ११ गतेदेखि स्थानीयको प्रदर्शनको चुरो यही कुरामा थियो । बम दिदीबहिनीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान नगरेकाले प्रहरीको दोषी बचाउने शंकास्पद भुमिका देखेर हामीले आन्दोलन गरेका हौँ, स्थानीय उर्मिला शाहीले भनिन् । एक महिना लामोे आन्दोलन चर्केर एकजनाको मृत्यु र धेरै घाईते हुने अवस्था पुग्दासम्म प्रहरी उपरीक्षक विष्ट र जोशीको टोलीले बम दिदीबहिनीको घरबाट अनुसन्धान गर्न नमान्नुको कारण के थियो ?
आन्दोलनको बलमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी उपरीक्षक र प्रहरी नायब उपरीक्षक बदलिएपछि मात्र बम दिदीबहिनीलाइ पक्राउ गरेर अनुसन्धन सुरु गरिएको छ । प्रहरीले अदालतबाट ६ दिन म्याद थप गरेर रोशनी र बबितामाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ ।
भीमदत्त नगरपालिका-२ एलटाखामकी १३ बर्षीया निर्मला पन्त साउन ११ गत्ते उखुवारीमा मृत फेला परिन् । शव भेटिएको सोमबार एक महिना वितिसक्दा पनि अहिलेसम्म निर्मलाको हत्यारा पत्ता लाग्त सकेको छैन । नागरिक दैनिकमा खबर छ ।
आफुहरुलाई पहिले राहतभन्दा पनि निर्मलाको हत्याराको अनुहार देख्न मन भएको उनकी आमा दुर्गादेवी पन्त बताउँछिन् । हामीलाई अहिले राज भन्दा पनि निर्मलाको हत्यारालाई कारवाही गरेको देख्न मन छ, उनले भनिन् ।
ट्याग्स: kanchanpur, Nirmala Pant, निर्मला पन्त
राजपा सांसद शाह विमानस्थलबाटै पक्राउ
गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलः भौतिक प्रगति ८२ प्रतिशत
भारत र चीनको सम्बन्ध सुधारले नेपालको समृद्धि यात्रा अनुकूलः प्रधानमन्त्री ओली
राजपाका सांसद शाहविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी
पारस खड्काद्वारा राष्ट्रिय टिमको कप्तानी छोडेको घोषणा
२५ वर्षीया पप स्टार सुली घरमै मृत फेला
दोस्रो चरणमा दैलेखको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण हुँदै